PVC mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Igbe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ,Mkpụrụ osisi na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ,Egwuregwu ihe nkiri
Home > Ngwaahịa > Ulo Okpokoro Ugbo > Ngwongwo ihe na-ekpo ọkụ na-emepụta ihe > PVC mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
Ihe Nlereanya.: XHC-L068B
Germinates osisi ngwa ngwa
PVC a na-arụ ọrụ ike. Mmiri àmà na inogide!
Na-amụba mkpụrụ osisi ma na-ebelata ihe ịga nke ọma
Mmiri na-enye aka ma na-akụ ihe ọmụma edere na tebụl
Na-adabere n'okpuru ahịhịa ọka.
Ụlọ mmiri na-arụ
Mgbọrọgwụ ọkụ na-akpaghị aka bụ 10 -20 ° F n'elu ọnọdụ okpomọkụ
Asambodo: OA , ROHS. C-Akọrọ.
Ike: 230V, 7-9W, Nkwụnye VDE
Onu ogugu: 390 * 250 * 215 MM
Ihe dị arọ: 0.99kgs
Ụdị ọdịdị: ntanetị
Ngwaahịa: isi nke ABS
Dome na-eme PET doro anya
tinye nkedo nke PS
Oghere: 4x6 = 24
Igbe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Mkpụrụ osisi na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Egwuregwu ihe nkiri Ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Ebe a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Onye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Ngwá na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ